Suuqa Kala Iibsiga: Antonio Conte Oo 140 Malyan Kusoo Xerogalin Doona Sadex Xidig Oo Muhiim Ah Ka Hor Dhamaadka Bishaan - Wargane News
Home Sports Suuqa Kala Iibsiga: Antonio Conte Oo 140 Malyan Kusoo Xerogalin Doona Sadex...
Tababaraha kooxda Chelsea Antonio Conte ayaa lagu soo waramayaa inuu 140 Malyan Oo Pound suuqa ku faraqi doono ka hor dhamaadka bishaan markaas oo uu suuqa xirmi doono wuxuuna soo xerogalin doonaa sadex xidig oo uu u arko iney kooxdiisa xoojin doonaan.
Sida ay ku warantay Sunday Express, Blues ayaa soo xerogalin doonta labada xidig ee sida ba’an loola xiriirinayay Kalidou Koulibaly iyo weeraryahanka Everton Romelu Lukaku maalmaha soo aadan.
Daafaca reer Senegal ayaa ku imaan doona garoonka Stamford Bridge aduun dhan 50 Malyan Oo Pound, Chelsea ayaana rajeyneysa iney arimaha xidigaan heshiis kala gaarto Napoli dhawaan.
Dhanka kale Romelu Lukaku ayaa dib ugu soo gurya noqon doona galbeedka London, inkastoo laga soo diiday dalabkii hore oo gaarayay 42 Malyan Oo Pound hadana dalab hormarsan ayey ka gudbiyeen kaas oo aan la ogaan balse waxaa la aaminsan yahay inuu ku kici doono qiimo ka badan 60 Malyan Oo Pound.
Sidoo kalana burburiyaha reer Brazil iyo kooxda Santos Thiago Maia oo 19-jir ah ayaa ah xidiga sadexaad kaas oo London ku imaan doona qiimo lagu sheegay 15 Malyan Oo Pound.
Hadii sadexdaan saxiix uu soo xerogaliyo Antonio Conte waxey ka dhigan tahay in xagaagan ay kooxda sameysay shan saxiix waxeyna horay ula soo wareegtay Antonio Conte iyo Michy Bashtuayi.